Malignant Otitis Externa (နားအတွင်းပိုးဝင်ရောင်ရမ်းခြင်း ) - Hello Sayarwon
Malignant Otitis Externa (နားအတွင်းပိုးဝင်ရောင်ရမ်းခြင်း )
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Malignant Otitis Externa (နားအတွင်းပိုးဝင်ရောင်ရမ်းခြင်း )
Malignant Otitis Externa (နားအတွင်းပိုးဝင်ရောင်ရမ်းခြင်း ) ကဘာလဲ။
နားအတွင်းပိုးဝင်ရောင်ရမ်းခြင်း သည် အထူးသဖြင့် ရေကူးသမားများတွင်ဖြစ်သော ရောဂါဖြစ်ပြီး နားအတွင်းပိုင်းတွင် ဖြစ်သောရောဂါဖြစ်သည်။ နားအတွင်းပိုင်းမှ တဆင့် အနားအပြင်ပိုင်းနှင့် ပတ်လည်ရှိ တစ်သျူးများ၊ မျက်နှာရိုးများနှင့် မျက်နှာအထိပါ ပြန့်နှံ့နိုင်သည်။
ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းသည် ပြင်းထန်သော နားတွင်းပိုးဝင်ရောင်ရမ်းခြင်းဖြစ်သည်။ ရေကူးသမားများတွင် ဖြစ်သော နားရောဂါဟုခေါ်သော်လည်း ယင်းသည် နားအတွင်းတွင်ရေများကျန်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။
Malignant Otitis Externa (နားအတွင်းပိုးဝင်ရောင်ရမ်းခြင်း ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
နားအတွင်းပိုးဝင်ရောင်ရမ်းခြင်းသည် Pseudomonas aeruginosa အမည်ရှိသော ဘက်တီးရီးယားကြောင့် ဖြစ်ပြီး နားအတွင်းပိုးဝင်ရောင်ရမ်းခြင်းဖြစ်သော လူများ၏ ၉၀% ကျော်သည် ဆီးချိုရောဂါရှိသူများဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရသည်။ နားအတွင်းပိုးဝင်ရောင်ရမ်းခြင်းသည် စိုထိုင်းဆများသော ဒေသများတွင် ပိုပြီးဖြစ်ပါသည်။
Malignant Otitis Externa (နားအတွင်းပိုးဝင်ရောင်ရမ်းခြင်း ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
နားအတွင်းပိုးဝင်ရောင်ရမ်းခြင်း၏ရောဂါလက္ခဏာများသည် သိသာပါသည်။ ယင်းတို့မှာ
နားအတွင်းမှ အနံ့ဆိုးသော အဝါရောင်၊ အစိမ်းရောင်အရည်များ အဆက်မပြတ်ကျဆင်းနေခြင်း
ခေါင်းလှုပ်လိုက်လျှင် နားထဲတွင် ပိုနာကျင်ခြင်း
အထက်ပါလက္ခဏာများခံစားရပါက သင့်ဆရာဝန်အားချက်ချင်းဆက်သွယ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ရောဂါကို စောစောကုနိုင်လေလေ ရောဂါပြန့်ပွားမှုနှင့် နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများ လျော့နည်းလေလေဖြစ်ပါသည်။
Malignant Otitis Externa (နားအတွင်းပိုးဝင်ရောင်ရမ်းခြင်း ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
နားအတွင်းပိုးဝင်ရောင်ရမ်းခြင်းသည် အမှန်အားဖြင့် ရေကူးခြင်းကြောင့်ဖြစ်သောနောက်ဆက်တွဲရောဂါ မဟုတ်ပါ။ ထိုရောဂါသည် သင့်တွင် အခြားကျန်းမာရေးပြသနာများရှိခြင်း၊ ကိုယ်ခံအားနည်းစေသော ဆေးများ၊ ကုသမှုများ ခံယူရခြင်းတို့ကြောင့် ပိုဖြစ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့်
သင့်တွင် ကိုယ်ခံအားကျစေသောရောဂါများရှိခြင်း၊ ထိုသို့ဖြစ်စေသော ဆေးများသောက်နေရပါက နားထဲသို့ ဘက်တီးရီးယားရောဂါများ ပိုဝင်စေပြီး ကူးစက်ရောဂါများကို ပို ဖြစ်စေပါသည်။
ဘက်တီးရီးယားပိုးဝင်ခြင်းသည် နားအတွင် တစ်သျူးများကို ပျက်စီးစေပြီး နောက်ထကပ် ဦးခေါင်းခွံအောက်ခြေတွင်ရှိသော အရိုးများကို ပျက်စီးစေခြင်းတို့ဖြစ်စေပါသည်။
ရောဂါကို မကုဘဲထားလျှင် ရောဂါပိုးများသည် ဦးနှောက်သို့ပြန့်နှံ့ခြင်း၊ ဦးနှောက်တွင်ရှိသော အာရုံကြောများသို့ပြန့်နှံ့ခြင်း နှင့် ကိုယ်ခန္ဓာ၏ အခြားအစိတ်အပိုင်းများသို့ပြန်ကနှံ့ခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်သည်။
Malignant Otitis Externa (နားအတွင်းပိုးဝင်ရောင်ရမ်းခြင်း ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
နားအတွင်းပိုးဝင်ရောင်ရမ်းခြင်းကို အဖြစ်များဆုံးသော အကြောင်းရင်းသည် ရေကူးခြင်းဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ရေကူးကန်များတွင် ကူးသောသူများတွင် ပိုဖြစ်သည်။ အခြား ဖြစ်စေနိုင်သော အကြောင်းများမှာ နှင်းခူဖြစ်ခြင်း၊ အဆီကြိတ်ဝက်ခြံများ ဖြစ်ခြင်း၊ နာဖာချေးကလော်ခြင်းကြောင်းထိခိုက်မိခြင်း၊ နာဖာချေးများလာခြင်း၊ နားကြားကိရိယာများတပ်ဆင်ခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။
Malignant Otitis Externa (နားအတွင်းပိုးဝင်ရောင်ရမ်းခြင်း ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
သင့်တွင် နားအတွင်းပိုးဝင်ရောင်ရမ်းခြင်း ဖြစ်နေပြီဟု သံသယရှိပါက
ပထမဦးစွာ သင့်ဆရာဝန်က သင့်ကို ကစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ပါလိမ့်မည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် သင့်ကျန်းမာရေး ရာဇဝင်ကို မေးမြန်းခြင်း၊ ကိုယ်ခံအားကို ကျစေမည့် အခြေအနေများရှိမရှိ စစ်ဆေးခြင်းတို့ ပြုလုပ်ပါလိမ့်မည်။
ထို့နောက် တိကျသော ကုသမှုလုပ်ရန် သိသင့်သည်များကို စစ်ဆေးပါလိမ့်မည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် နားထဲသို့ကြည့်ပြီး စစ်ဆေးခြင်း၊ ခေါင်း နှင့် နားအနောက်ဖက်နေရာများကို စစ်ဆေးခြင်း တို့ပြုလုပ်ပါသည်။
နားတွင် အရည်များယိုစိမ့်ထွက်ခြင်းရှိနေပါက ထိုအရည်နမူနာယူပြီး ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုများလုပ်ခြင်းဖြင့် နားပိုးဝင်ခြင်းကို ဖြစ်စေသော ဘက်တီးရီးယားအကောင်ကို သိနိုင်ပါသည်။
သင့်တွင် နားအတွင်းပိုးဝင်ရောင်ရမ်းခြင်းဖြစ်ကြောင်းသေချာပါက ဆရာဝန်သည် အောက်ပါစစ်ဆေးမှုများကို ပြုလုပ်ပါလိမ့်မည်။
Malignant Otitis Externa (နားအတွင်းပိုးဝင်ရောင်ရမ်းခြင်း ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ရောဂါ အခြေအနေ အပေါ်မူတည်ပြီး အဓိကအားဖြင့် ပုံစံ ၂ မျိုးဖြင့် ကုသပါသည်။
နားအတွင်းပိုးဝင်ရောင်ရမ်းခြင်းအတွက် ပိုးသတ်ဆေးသည် မပါမဖြစ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ထိုဖြစ်စဉ်သည် လပေါင်းကြာမြင့်စွာ ကုသရမည့် ကုသမှုမျိုးဖြစ်ပါသည်။ သင့်ရောဂါအ ခြေအနေပြင်းထန်လျှင် ပိုးသတ်ဆေးကို လက်မောင်းရှိသွေးပြန်ကြောထဲသို့ထိုးသွင်းပြီး ကုရနိုင်ပါသည်။ ရောဂါသက်သာသွားသည့်တိုင်အောင် ဆေးပတ်ပြည့်သည်အထိ ဆက်ထိုးသွားရမည်ဖြစ်သည်။
ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းကြောင့် နားအတွင်းတစ်သျူးများပျက်စီးခြင်းကြောင့် လိုအပ်လျှင် ထိုတစ်သျူးများကို ဖယ်ရှားလျှင် ခွဲစိတ်မှုများပြုလုပ်ရနိုင်ပါသည်။ သင့်ဆရာဝန်က ခွဲစိတ်ရန်လိုအပ်လျှင် သင့်အားပြောပါလိမ့်မည်။ ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းကို ကုသပြီး အနာများကျက်သွားမှသာ ခွဲစိတ်ခြင်းကို ပြုလုပ်ရပါသည်။
နေထိုင်မှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အိမ်တွင်းကုထုံးများကိုပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် နားအတွင်းပိုးဝင်ရောင်ရမ်းသူများအတွက် ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သလဲ။
နားအတွင်းကိုကုတ်ခြင်း၊ နားကျပ်တံ ဂွမ်းလိပ်များ၊ အပ်များ၊ လက်သည်းများနှင့် ကလော်ပြီး သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းများ မပြုလုပ်ရပါ။
နားဆို့ကိရိယာများ၊ နားကျပ်များ ကိုကြာရှည်စွာ အသုံးမပြုပါနှင့်။ ထိုအရာများသည် နာဖာချေးများကို ပိုဆိုးစေသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
နားအတွင်းသို့ ဆပ်ပြာ၊ ခေါင်းလျှော်ရည်များ မဝင်အောင်ဂရုပြုပါ။ ထိုအရာများသ်ည နားယားစေခြင်း၊ နားကို ထိခိုက်စေခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
သင်သိလိုသည်များရှိသော် ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ကာ ပိုမိုကောင်းမွန်သော အကြံဉာဏ်များရယူနိုင်ပါသည်
Malignant otitis externa. http://www.healthline.com/health/malignant-otitis-externa.Accessed 29 Feb 2017.
Malignant otitis externa. http://www.webmd.com/cold-and-flu/ear-infection/tc/swimmers-ear-otitis-externa-topic-overview#2.Accessed 29 Feb 2017.
Malignant otitis externa. http://www.aafp.org/afp/2012/1201/p1055.html.Accessed 29 Feb 2017.